Solika sy gazy-solika sy gazy-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Home>Applications>Oil sy ny Gas
Fotoana: 2020-10-09 Hits: 36
Valve pipeline dia namboarina sy namboarina mifanaraka amin'ny API6D & ISO14313 ary azo ampiasaina amin'ny tsipika fandefasana natao ho an'ny ASME B31.3, ASME B31.4, ASME B31.8 na fenitra mitovy amin'izany.
Titan dia mamokatra tsipika marobe amin'ny alàlan'ny valizy mitoka-monina izay mampihena ny fidinan'ny tsindry, ao anatin'izany ny valva feno tsy miverina toy ny baolina trunnion, amin'ny alàlan'ny vavahady lakan-drano ary ny valizy fanovana savily feno.
Ny valizy mitoka-monina Titan dia azo alamina amin'ny endri-javatra mitokana isan-karazany ao anatin'izany ny sakana roa & ny rà ary / na ny fanokanan-droa sy ny rà.
Ny fipetrahana elastomerika sy thermoplastic (malefaka) dia ampiharina amin'ny serivisy madio na valves nalevina mandry, raha toa kosa ny fanamafisam-peo vita amin'ny metaly sy metaly azo atokana ho an'ny fitokana-monina lehibe toy ny fananganana scraper sy fandraisana fotodrafitrasa, menaka maloto ary serivisy erosive / maloto.
Ny valantsara Titan dia azo ahetsika miaraka amin'ny pneumatika, gazy mivantana, lasantsy amin'ny solika na tariby elektrika afaka manome fiatoana tapaka rehefa voalaza.